भारतको गतिविधिले मर्माहत बनायो भन्दै अन्ततः सिमाबारे बोले महानायक राजेश हमाल – के भने ? हेर्नुहोस् भिडियो – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/भारतको गतिविधिले मर्माहत बनायो भन्दै अन्ततः सिमाबारे बोले महानायक राजेश हमाल – के भने ? हेर्नुहोस् भिडियो
भारतको गतिविधिले मर्माहत बनायो भन्दै अन्ततः सिमाबारे बोले महानायक राजेश हमाल – के भने ? हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाण्डौं । नेपालमा यतिबेला कोरोनाको त्रास फैलिरहेको बेलामा सिमा बिवाद पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको नया नक्सा तथा क्षेत्रफल सार्बजनिक गरेपस्चात यो बिवादले उच्च रुप लिएको हो ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा सार्बजनिक गरेको सो भिडियोमा “छिमेकी भारतको गतिविधिले मलाई मर्माहत बनाएको छ । ईतिहास साक्षी छ, लिम्पुयाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो । भारतको पछिल्लो गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन् । हाम्रो पूर्खाहरुले बहादुरीका साथ लड्नुको एउटै उद्देश्य आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसक्तालाई अक्षुण्ण राख्नु थियो ।
यसकारण सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो देशको सिमा सम्बन्धमा कसैंगँपनि सम्झौता गर्दैन ।” भनेका छन् । अन्तमा उनले सिमानाको समस्यालाई भारतले ईतिहास, तथ्यांक तथा प्रमाणको आधार हेरेर कुटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
भारतीय मिडियाले अति गरेपछि रविले दिए कडा चेताबनी, भारतीय च्यानल बन्द गरेकोमा खुशी
चर्चित गायिका सुनिता दुलालको ‘चुरा टीका लाली’ लोकप्रिय बन्दै (भिडियो)
श्रीमानमाथि नै किन शं*का गरियो ? वरिष्ठ अधिवक्ताले खोले मुख ! सिसिटिभी फुटेजबारे खुल्यो नयाँ कुरा (भिडियो सहित)